Waar ma labadii ragcadood een idin tukiyaan muslim ku noqday! by Baxnaan xaaji aden(Hadhwanaagnews) Tuesday, September 18, 2012 Dhaqane iyo dhaashane dhalin weeye magaallo.dhaqankoodu mid maaha .Dhaliil la iskama qaato .DHafoor taabasho
Dhaqane iyo dhaashane dhalin weeye magaallo.dhaqankoodu mid maaha .Dhaliil la iskama qaato .DHafoor taabasho weeye .Dhibtana la iskuma eego.daily way kaftamaan . Hadana la isma dhegaysto.Dhoohanaad tahay waalan iyo adaa dhoocil ka liita warkoodaa ku dhamaadee .Kaalayoo bal dhegayso.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
DHaqane:Waar heedhe sowdinkii mujahidiinta sheegan jiray markaa mucaaridka ahaydeen ee odhan jiray haddii nala doorto cidaanu wax u qabanayno mujaahidiintaa u horaysa ,maa mujaahidiinta wax u qabataan.
class=MsoNormal>DHaashane:Mujaahidiintu miyey idiin soo ashkatoodeen maxaa kaa galay?
Dhaqane:Dee mayee ashkatana way dhaaftoo,waa kuwan farta dhexda ka qaniinsan ee leh .waar yaa codkaygii uun ii soo celiya.Ta kale ;mee wixii aa dadka ku akhriyi jirteen ee odhan jirteen meel walba janaanu ka dhigaynaa ?
Dhaashane:Dee adiga horta janno iska daayoo , hadaanu fardowsa ka dhignana ma kuu muuqnaysaa baa ka horeysa?
Dhaqane:Horta dadku anigoo qudha maahee ,hadaa wax wanaagsan samaysaan ,cid uun baa sheegi laheyd .Waar adeer xafladahiinaa iskaga jira inta meeshan la idinka soo gaadhayo.
Dhaashane:Dee kula yaabi maayoo lacagtii aa iska daldalan jirteen baa weydeen.markaa waxaa sheegtaanba waa dowgiin.Adeer annagu dalkan waanu u shqaynaynaa .Shillin la cunni maayo intaanu joogno.Ama qayliya ama iska daaya.
Dhaqane :Ma sidaasaa idinka dhaba ,oo doonaysaan weliba in la idinku doorto?
DHaashane:Ma kolbaa adinka ciddi idin dooranaysaa?
DHaqane:Waar waxa la yidhi:Beri baa nin gaal ah oo seef gacanta ku sitaa u yimi rag badan oo masaajid ku jira .Markaasuu ku yidhi : Waar wax muslim ihi ma idinku jiraan ?Markaasaa la wada baqay oo la wada aamusay.Nin aad u dhiiranaa oo geesi ahaa baa yidhi: Haayoo anagaa muslim ah.Markaasuu kii gaalka ahaa ku yidhi:Bal debeda u soo bax.Ninkii muslimka ahaana wuu raacay.Markii debeda loo baxay buu ku yidhi: Ninyow gurigaygu waakan masaajidka kasii jeeda ee kaalay neefkan sidii muslimiinta iigu gowrac.Ninkii muslimka ahaa baa raacay oo u gowracay.Kii gaalka ahaa baa yidhi: Adeer haragana iiga bixi .Ninkii muslimka ahaa baa yidhi :Anigu haraga maka bixin aqaan e cid kale doono.Kii gaalka ahaabaa masaajidkii ku soo noqday isagoo mididii dhiiga lahaydna sita .Markaasuu raggii meesha ku hadhay ku yidhi :Waar wax muslim ah oo haraga bixin yaqaan ma leedihiin? Intay aad u baqeen ,oy moodeen inuu ninkii hore soo dilay, ayey imaamkii farta ku wada fiiqeen .Imaamkii baa intuu baqay yidhi:Waar ma labaddii rakcadood een idinku tukinayaan muslim ku noqday?Hada markaa waxa taagantiin sow maahaa : Ma labaddii cisho eenu doorashada doonaynaanu rag wanaagsan ku noqonay?